Multilingual Bible: Nepali New Revised Version, Job 12
Nepali New Revised Version, Job 12
2 “निस्‍सन्‍देह तपाईंहरू मानिस हुनुहुन्‍छ, र सम्‍पूर्ण बुद्धि तपाईंहरूसितै मर्नेछ!
3 तर तपाईंहरूको जस्‍तो मेरो पनि मन छ, केही कुरामा पनि म तपाईंहरूभन्‍दा कम छैनँ। यस्‍ता कुरा कसले जान्‍दैन र?
4 “तापनि म मेरा मित्रहरूको निम्‍ति एउटा हाँसोको पात्र भएको छु, यद्यपि मैले परमेश्‍वरलाई पुकारें, र उहाँले उत्तर दिनुभयो– निर्दोष र निरपराध भए पनि हाँसोको पात्र।
5 सुखमा बस्‍ने मानिसहरू दुर्भाग्‍यलाई घृणा गर्दछन्‌। चिप्‍लन लागेका पाउँजस्‍तै तिनीहरू हुन्‍छन्‌।
6 लूटपीट गर्नेहरूका पालमा खलबल हुँदैन, र परमेश्‍वरलाई रीस उठाउनेहरूचाहिँ सुरक्षित रहन्‍छन्‌– तिनीहरू जसले आफ्‍ना देवहरूलाई आफ्‍ना हातमा बोक्‍छन्‌।
7 “तर गएर पशुलाई सोध्‍नुहोस्‌ र तिनीहरूले तपाईंलाई सिकाउनेछन्‌, अथवा आकाशका चराहरूलाई, अनि उनीहरूले तपाईंलाई बताउनेछन्‌,
8 अथवा पृथ्‍वीसित बोल्‍नुहोस्‌, र त्‍यसले तपाईंलाई सिकाउनेछ, वा समुद्रका माछालाई तपाईंलाई सिकाउन दिनुहोस्‌।
9 परमेश्‍वरको आफ्‍नै हातले यी सबै गर्नुभएको हो भनी यी सबैमध्‍येबाट कसले जान्‍दैन र?
10 जीवितहरू सबैका प्राण, सबै मानिस-जातिका आत्‍मा परमेश्‍वरकै हातमा छ।
11 के जिब्रोले खानेकुराको स्‍वाद लिएझैँ बोलेका वचन कानले जाँच गर्दैन र?
12 के पाकाहरूका बीचमा बुद्धि पाइँदैन र? के लामो आयुले समझ ल्‍याउँदैन?
13 “बुद्धि र पराक्रम परमेश्‍वर कै हुन्‌, उहाँसँगै सल्‍लाह र समझ छन्‌।
14 उहाँले भत्‍काउनुभयो भने त्‍यो पुनर्निर्माण हुँदैन, उहाँले कैद गर्नुभएको मानिसको छुटकारा हुँदैन।
15 उहाँले पानी रोक्‍नुभयो भने खड़ेरी पर्छ, उहाँले त्‍यो छोड़िदिनुभयो भने त्‍यसले भूमिलाई सर्वनाश पार्छ।
16 सामर्थ्‍य र विजय उहाँ कै हुन्‌, धोका दिने र धोका खाने दुवै उहाँकै हुन्‌।
17 उहाँले सल्‍लाहकारहरूलाई निर्बुद्धि तुल्‍याउनुहुन्‍छ, र न्‍यायाधीशहरूलाई मूर्ख बनाइदिनुहुन्‍छ।
18 राजाहरूले लगाइदिएका बन्‍धनलाई उहाँले फुकाल्‍नुहुन्‍छ, अनि तिनीहरूका कम्‍मरमा अधिकारको पटुका लगाइदिनुहुन्‍छ।
19 उहाँले पूजाहारीहरूलाई नाङ्गो पारी डोर्‍याउनुहुन्‍छ, र चिरकालदेखि काम गर्ने मानिसहरूलाई उहाँले खारिज गरिदिनुहुन्‍छ।
20 भर पर्न सक्‍ने सल्‍लाहकारलाई उहाँले चूप तुल्‍याउनुहुन्‍छ, वृद्ध मानिसको बुद्धि उहाँले रद्द गर्नुहुन्‍छ।
21 उहाँले शासकहरूमाथि निन्‍दा खन्‍याउनुहुन्‍छ, र शक्तिशालीलाई नि:शस्‍त्र पार्नुहुन्‍छ।
22 उहाँले अन्‍धकारका गहिरा रहस्‍यहरू प्रकट गर्नुहुन्‍छ, र निस्‍पट्ट अँध्‍यारो उहाँले प्रकाशमा ल्‍याउनुहुन्‍छ।
23 उहाँले जाति-जातिहरूलाई महान्‌ बनाउनुहुन्‍छ र, तिनीहरूलाई नाश गर्नुहुन्‍छ उहाँले जातिहरूलाई विस्‍तार गर्नुहुन्‍छ र तिनीहरूलाई छरपष्‍ट पार्नुहुन्‍छ।
24 उहाँले पृथ्‍वीका शासकहरूका बुद्धि खोस्‍नुहुन्‍छ, र बाटो नभएको उजाड़-स्‍थानमा यताउता बरालिन तिनीहरूलाई छोड़िदिनुहुन्‍छ।
25 उज्‍यालोविना तिनीहरू अन्‍धकारमा छामछाम-छुमछुम गरिहिँड्‌छन्‌, र मताहा मानिसझैँ धरमरिँदै हिँड्‌नलाई उहाँले तिनीहरूलाई त्‍यागिदिनुहुन्‍छ।
Job 11 Choose Book & Chapter Job 13